माउन्ट फुजी | हेर्नुहोस् यात्रा समाचार
को प्रतीक जापान छ माउन्ट फुजी। मa्गा, एनिमे वा जापानी चलचित्रका कुनै फ्यानले यो थाँहा पाउँदछ र जो कोहीले पनि देश भ्रमण गर्न चाहान्छन् यसलाई समावेश गर्दछ पौराणिक माउंट तपाईंको बाटोमा। र यसको नजिक जानको लागि यसको नजिक जान, यसको हिलोमा चढ्न, पर्वतारोहणमा जानुहोस् वा पहाडको शान्तिको आनन्द लिनुहोस्।
यही कारणले आज हामी विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध हिमालहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं: प्रभावशाली पर्वत फुजी।
1 माउन्ट फुजी
2 माउन्ट फुजीको भ्रमण गर्नुहोस्
सिद्धान्त मा यो भन्न लायक छ यो जापानको सब भन्दा अग्लो पहाड हो र यसको 3.776 XNUMX। मिटर अग्लो छ। थप रूपमा, यो टापुमा अवस्थित एशियाको दोस्रो उच्च पहाड हो। यो एक को बारे मा छ सक्रिय ज्वालामुखी यद्यपि अन्तिम विस्फोट १ XNUMX औं शताब्दीको सुरूमा भएको थियो।
फ्युजिसन, जापानीहरूले कल गरे जस्तै, केहि थोरै छ टोकियो बाट एक सय किलोमिटर र यदि तपाईं सुन्दर दिनमा अग्लो भवनमा बस्नको लागि पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो कोठाबाट पनि यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ। यसको सौन्दर्य तथ्यमा निहित छ कि यो यसको प्रभावशाली उचाई संग अद्वितीय छ र यो एक उत्तम हिमाल हो, एक सममित शंकु जहाँबाट तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ कि लगभग आधा वर्ष मा हिउँ को एक सिबोरियम द्वारा शीर्ष कभर छ।
१ 2013 XNUMX Since देखि विश्व सम्पदा हो तर यो राष्ट्रिय महत्त्वको त्रिकुटुको हिस्सा हुनु भन्दा पहिले माउन्ट हाकू र माउन्ट टेटको साथ तीन पवित्र पर्वतहरू। यस पहाडलाई चारवटा तालहरूले घेरेको छ जुन आज धेरै पर्यटन स्थलहरू हुन्: कावागुची ताल, यामानाका, मोटोत्सु, साई र शोजी र आशी। पानीका यी शरीरहरूका दृश्यहरू अद्भुत छन्।
हामी उही पर्वतमा आकर्षणहरूको साथ सुरु गर्न सक्छौं: सुबाशिरी स्टेशन, फुजिनोमिया, सुबारु लाइन स्टेशन,, फुजीटेन स्नो रिसोर्ट, गोटेम्बा स्टेशन and र यती स्नो टाउन। वास्तवमा त्यहाँ दश स्टेशनहरू छन्, एउटा पहाडको फेदमा र दशौं शीर्षमा, तर डामर सडकहरू to सम्म जान्छ र यहाँ त्यहाँ पहाडका विभिन्न पक्षमा पाँच स्टेशनहरू छन्। पाँच मैले माथि उल्लेख गरें।
La स्टेशन Sub सुबाशिरी माउन्ट फुजीको पूर्वी ढलानमा छ र यो टोकियोबाट सार्वजनिक यातायात को उपयोग गरेर सजीलो पहुँच मध्ये एक हो। यो एक धेरै विकसित स्टेशन होईन र त्यहाँ केवल एक पार्किंग स्थल, विश्राम कक्षहरू र केही पसल र रेष्टुरेन्टहरू छन्। त्यहाँ कुनै लाँकर छैन र यदि तपाईंसँग कार छ भने सडक छ जुन यहाँ जान्छ तर चढाई मौसममा बन्द हुन्छ, जुन जुलाई १० देखि सेप्टेम्बर १० सम्म हुन्छ जुन बसहरू प्रशस्त हुँदा पनि हुन्छ।
यहाँ सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सुबारिशी ट्रेल ज you्गलको बीचबाट तपाईंलाई लैजान्छ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छैनन् किनकि अन्य पर्वत मार्गहरू बढी लोकप्रिय छन्। आरोहणले eight देखि hours घण्टा लिन्छ र तल १। Meters० मिटरको औसत उचाईमा to देखि hours घण्टा लाग्छ। यदि तपाईं कम हिंड्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फरक चोटीमा जान सक्नुहुन्छ, कोफुजी पीक वा सानो फुजी, जुन स्टेसनबाट जंगलको माध्यमबाट २० मिनेट पैदल यात्रा पछि पुग्न सकिन्छ।
La स्टेशन F फुजीनोमिया यो फुजी स्टेशनहरु को दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय र विकसित स्टेशन हो। यो सजिलैसँग पहुँचयोग्य छ र तपाईं त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ JR Tokaido shinkansen र त्यसपछि बसहरू। योसँग धेरै पार्कि,, पसल, शौचालय, र रेष्टुरेन्ट छ। यो २2400०० मिटरको उचाईमा छ र यसले आफ्नै मार्ग पनि प्रदान गर्दछ फुजिनोमिया ट्रेल, माउन्ट फुजीको सब भन्दा छोटो मार्ग। आरोहण चार र सात घण्टा लाग्छ र तल दुई र छ बीच लिन्छ।
यहाँ एक साइड शिखर पनि छ, होइजान, टोकियो वा प्रशान्त महासागरको धेरै विचित्र दृश्यहरूको साथ। त्यहाँ पनि छ फुजी सुबारु स्टेशन। que सबैभन्दा लोकप्रिय छ सबै र टोकियो बाट उत्तम पहुँचको साथ एक। यो बर्षको अधिकतम पहुँचयोग्य हुन्छ र काउगुचीको शहरबाट फुजीसम्म पुग्ने टोल सडक सुबारु लाइन प्रयोग गरेर सजिलैसँग पुग्न सकिन्छ। थप रूपमा, यो २2300०० मिटरको उचाईमा भएकोले यसको परिदृश्यको राम्रा दृश्यहरू छन्।
त्यसो हो गोटेम्बा स्टेशन, १1400०० मिटरमा र अविकसित, र फुजीतन र यती स्की रिसोर्टहरू, यो सानो छ। अब, धेरै मानिसहरू चढाई मौसम आधिकारिक रूपमा खोल्नको लागि कुर्दछन् किनकि यो वास्तवमै एक अविस्मरणीय अनुभव हो।
आधिकारिक मौसम जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ जुन सामान्यतया हिउँ हुँदैन र आश्रयहरू खुला छन्। त्यहाँ जापानी र धेरै विदेशी पर्यटक पनि छन् यदि तपाईं चाहनुहुन्न भने मान्छेहरूको भीड अगस्ट मध्यमा ओबोन सप्ताहबाट टाढा रहन्छ जुन सुपर लोकप्रिय छ।
Y यदि तपाईं बढ्न वा फुजी आरोहण गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ, वरपरका शहरहरू भ्रमण गर्नुहोस् र तिनीहरूको तालहरूको आनन्द लिनुहोस्। यसैले, त्यहाँ छन् फुजी लेक्स, हाकोने y फुजीनोमिया। फुजी लेकहरू पहाडको उत्तरी आधारमा छन्। म केही दिन गएँ कावागुचिको र म राम्रो समय थियो। म टोकियोबाट बसमा आइपुगेँ, म तालको अतिक्रमण गर्दै एक सुपर ओन्सेन होटेलमा बसें, म एउटा मोटरसाइकल भाडामा लिएर पेडिलि of्ग गर्दै थकित भएँ, म केबलवेबाट माउन्ट टेन्जोमा गएँ ...
तपाईं अधिक तालहरू देख्न सक्नुहुनेछ तर त्यहाँ अब तपाईं बाइकबाट जान सक्नुहुन्न र कार भाडा लिन सुविधाजनक हुन्छ। म तीन दिनको लागि जाँदै थिएँ त्यसैले यो लायक थिएन। मेरो सल्लाह यो छ कि यदि तपाई अधिक गर्न चाहानुहुन्छ वा यो फुजीमा दोस्रो पटक हो भने हाकिन भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्।
Hakone Fuji Hakone Izu राष्ट्रीय पार्क को हिस्सा हो, टोक्यो भन्दा सय किलोमिटर भन्दा कम। यो एक धेरै लोकप्रिय गन्तव्य हो र म सुझाव दिन्छु कि दुई चार दिन, तीन वा चार धेरै राम्रोको लागि। पर्यटक अक्सर एक बनाउँछन् दिन यात्रा तर सत्य मा तपाईं यसलाई यातायात को माध्यम मा खर्च र तपाईं केहि रमाईलो छैन। त्यहाँ फरक छन् पर्यटक पास सबै कुराको फाइदा लिनको लागि र यसैले यो निर्णय गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई कतिन्जेल बस्नुहुन्छ।
El Hakone सर्किट सबैले के गर्छन्। यो हकोने तोजान केबलवेको टर्मिनस, सउजान स्टेशनलाई, अशिनोको तालको किनारमा तोगन्दै स्टेशनको साथ ओवाकुदनी र उबाको रोकिन्छ। यो यात्रा द्वारा कभर गरिएको छ Hakone नि: शुल्क पास र यात्रा राम्रो छ किनकि तपाईंसँग पहाड, आकाश, फ्यूमरोल्स, ज of्गलको दृश्यहरू छन् ... सम्पूर्ण यात्रा गर्नको लागि यसले करीव पाँच घण्टा लिन्छ, जुन तालमा समुद्री डाकू जहाज सवारीमा समाप्त हुन्छ।
म के सुझाव दिन्छु? आधा बाटोमा एउटा स्टेसनमा रहनुहोस्, त्यहाँ रयोकन, सुन्दर परम्परागत बासस्थानहरू छन्, र त्यो यात्रालाई अर्को दिन अझ बढी बनाउनुहोस्। त्यो हो, तपाईं टोकियोबाट आइपुग्नुभयो, केबलवे लिनुहोस्, स्टेशनमा पुग्नुहोस् जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ, आराम गर्नुहोस्, हिंड्नुहोस्, हिंड्नुहोस् र अर्को दिन तपाईं सर्किट जारी राख्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ कि यो एक दिनमा सबै कुरा गर्नुभन्दा हजार गुणा राम्रो छ। HFP दुई दिनको लागि Shinjuku 5140१5640० येन र days दिनको लागि34000० लागत। यदि तपाईं क्षेत्र मा पास खरीद गर्नुहुन्छ, ओडवारामा, मूल्य दुई दिनको लागि 4500००० येन छ र days XNUMX०० तीन दिनको लागि।
यी मूल्यहरू मार्च ,१, २०१ 31 सम्म हो, अप्रिलमा शुरू हुँदै यो increases 2019००/5700०००० र 6100 4600०० / 5000०००० येनमा बढ्छ। मलाई लाग्छ माउन्ट फुजी क्षेत्रको भ्रमण गर्न सिफारिश गरिन्छ जब कोही जापान भ्रमण गर्दछन्। टोकियो अद्भुत छ, तर प्राकृतिक सौन्दर्यको यो मोती पत्ता लगाउने सय किलोमिटर टाढा आकर्षण थप गर्दछ। यो गर्नबाट रोक्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » माउन्ट फुजीको भ्रमण गर्नुहोस्